နောက်ကွယ်ကဖြစ်ရပ်မှန်ကိုလူမိသွားတဲ့ ဂျပန် Customer service တစ်ခု !!!!!! - JAPO Japanese News
နောက်ကွယ်ကဖြစ်ရပ်မှန်ကိုလူမိသွားတဲ့ ဂျပန် Customer service တစ်ခု !!!!!!
လာ 23 Mar 2020, 16:51 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဘယ်ဆိုင်ကိုပဲသွားသွား ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင် ပျူငှာကြတယ်လို့ပြောရင် မမှားနိုင်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံးဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်တဲ့ NTT docomo ရဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဆိုးရွားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
Docomo ဆိုတဲ့ဆိုင်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီး၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းလင်းပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာပါ….။
ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတာက ပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲ အဲ့ဒီနဲ့တူညီတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပါ….။
ဂျပန်မှာက ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေက မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဖုန်း model အမျိုးအစားမှန်သမျှ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
Smart Phone Show room မှာမဟုတ်ဘဲ၊ အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဆိုင်တစ်ခုမှာ Smart Phone model လဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသားမှာ ပြဿနာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာ သူ့ဖုန်း model အမျိုးအစားလဲမယ်ဆိုပြီး၊ docomo ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဆိုင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖုန်း model ပြောင်းတာကလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားပြီး၊ စတာပလာနဲ့ ညှပ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ဝန်ထမ်းက ကွန်ပျူတာနဲ့ data သွင်းနေတဲ့အချိန်၊
သူကလည်း အားနေတဲ့အတွက် စာရွက်စာတမ်းကိုလှန်လောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီလိုရေးထားတဲ့ စာက…….
“ မိဘဆီကတောင်းမယ့် ငွေတောင်းခံလွှာ ကလေးနံပါတ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီကောင်တော့ shit ပဲ။ ”
ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးအနှုန်းနဲ့ဆိုရင် “ ငလူးကောင်” ပေါ့
“ မိဘကငွေရှင်းပေးမှာဖြစ်လို့၊ ကျသင့်ငွေအတွက် ကရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အသက်ကြီးနေပြီမိဘဆီက ဖုန်းဖိုးတောင်းတုန်းပဲ ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ကရုစိုက်မယ်မထင်ဘူး၊ စျေးနှုန်းplanကိုပြောင်းလိုက် ” ဆိုပြီးရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာ မိသားစုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီး၊ ငွေစာရင်းတွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဖခင်နာမည်သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပိုပြီးအလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်လို့ပါတဲ့……။
အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ အထက်လူကြီးက ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စျေးနှုန်းကိုပြောင်းလိုက်ဖို့ စာနဲ့ရေးပြီး ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားခမျာတော့ ဘာမှမသိရှာဘူး…….
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီရေးထားတဲ့စာဟာ တစ်ခြားစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ညပ်ပါသွားပြီး အဲ့ဒီအမျိုးသားလက်ထဲကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။
ပြောရရင် ရေးထားတာက တော်တော်ရိုင်းပါတယ် !!!!!!
သေချာတာပေါ့…….တာဝန်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီး အကြောင်းအရင်းရှင်းပြခိုင်းပေမဲ့၊ ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူကလည်း ဖြေရှင်းချက်မပေးဘဲ တောင်းပန်တာတစ်ခုပဲလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို အမျိုးသားက Twitter ပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါ၊ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာက လူသိများပြီး၊
Twitter မှာတော်တော်လေး ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်လောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်၊ အဲ့ဒီဆိုင်တာဝန်ခံကနေ တောင်းပန်စာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ တောင်းပန်မှုကတော့ အရမ်းကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ !!!!
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ＮＴＴ docomo ရဲ့ ငှာနချုပ်ကနေ ဒီစာလေးတစ်ဆောင်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
(မသင့်လျော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ရေးထားမိတဲ့ စာရွက်ကို၊ ဧည့်သည်ဆီပေးမိလိုက်တာ အမှန်ပါပဲ။ အခြားအသေးစိပ်အချက်အလက်တွေကိုလည်း လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။)
(ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကို အလေးအနက်ထားပြီး၊ ဧည့်သည်အတွက် မသင့်တော်တဲ့အကြံအစည်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။)
(docomo ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာ၊ သင့်လျော်သောရောင်းအားနဲ့လိုက်နာမှု အသိအမြင်များကို မြှင့်တင်ပေးပါမယ်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ဗဟုသုတများရရှိစေဖို့နဲ့ တုန့်ပြန်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာစေဖို့၊ လိုက်နာမှုအသိအမြင် မြှင့်တက်လာစေဖို့ လုပ်ဆောင်လျက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီဆိုင်သာမက အခြားဆိုင်များအားလုံးမှာလည်း လမ်းညွှန်မှုတွေကို ပိုမိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်လုပ်ဆောင်သွားပြီး၊ နောက်အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်တော့ဖို့ သတိပြုလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်…..)
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာ ဧည့်သည်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နံပါတ်တစ်ပဲလို့လူတိုင်းက သိနေကြတဲ့အတွက် ဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ဆိုးရွားတယ်လို့ စာဖတ်သူတို့ရော ထင်မိကြပါသလား !!!!
စက်ဘီးနှင်းလိုက်ရုံနဲ့ ကြော်ငြာပေးမယ့် STAMP BIKE
Pokémon Go စွဲလမ်းနေတဲ့ ဖိုးဖိုး
အိုဆာကာ၏ကူးစက်မှုအခြေအနေအတွက် မီးနီပြပြီး ၁၅ ရက်နေ့အထိမလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ နောက်ဆုံးထိန်းချုပ်တော့မည်
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ရထားစီးရင်းနဲ့ ဘာလုပ်ကြလဲ ?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် Shinzo Abe က ကျောင်းတွေအားလုံးယာယီပိတ်ဖို့ ပြောကြားခဲ့!!!
ဖူဂျီတောင် ပေါက်ကွဲမယ် ! ?
(၂) ရက်နေ့ တိုကျိုမြို့ကူးစက်မှုအသစ် ၅၀၀ ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြု
တိုကျိုမြို့မှာ ကူးစက်ခံရသူအသစ် အယောက် ၁၀၀ ထက်ကျော် !!!!
ထွက်ပြေးရင် ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
Johnny & Associates မှ J Storm YouTube Channel ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ။